Ciidamada Itoobiya Oo lagu weeraray Halgan. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Ciidamada Itoobiya Oo lagu weeraray Halgan.
On Nov 28, 2019 566 0
Dagaalyahanno katirsna ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday difaacyada ciidamada Xabashida Itoobiya ee deegaanka Halgan gobolka Hiiraan ee bartamaha dhulkeena Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa ku waramaya in ciidamada Mujaahidiinta saqdii dhexe ee xalay ay weerar xoogan ku ekeeyeen saldhiga ciidamada Xabashida ee deegaanka Halgan.
Dagaal in muda ah socday oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ka dhacay Halgan, waxaana ciidamada Mujaahidiinta ay adeegsanayaan hub kala duwan oo ay ku jiraan garneellada garbaha laga rido.
Goobjoogayaal Halgan ku sugan waxay soo sheegeen in ciidamada Itoobiyaanku ay ka muuqato cara xoogan, islamarkaana saaka la arkayay iyagoo indhaha taag taagaya, taas oo muujineysa inuu gaaray khasaare culus.
Marar badan, ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay weeraro culus ku qaadeen ciidamada Xabashida ee heysta Halgan iyo guud ahaan meelaha ay ka joogaan gobollada Soomaaliya.